တုန်ခါနေသောဆန်စပါးသန့်ရှင်းစက်သည်ဂျုံစေ့ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်,ပဲပုပ်,ပြောင်းဖူး,မြေပဲ,ငရုတ်သီးစိမ်း,ကျောက်ကဲ့သို့သောလေးလံသောနိုင်ငံခြားအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်စပါးစိစစ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်, သတ္တုနှင့်ဖန်အပိုင်းအစစသည်တို့ကို. ဂျုံကနေ, စပါး, ပြောင်းဖူး, နှမ်းစသည်တို့ကို , ပစ္စည်းအလေးချိန်ကွာခြားချက်အရဒီစပါးသန့်ရှင်းစက်သည်တုန်ခါမှုအခြေခံလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကိုတုန်ခါမှုဖြစ်စေသည်, တုန်ခါမှုလွှဲခွင်ကိုချိန်ညှိနိုင်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းကိုပိုမိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိစေသောလက္ခဏာများရှိသည်, ခဲယဉ်း enduring.Grain Screener စက်စက်ထိန်သိမ်းပါဝင်ပါသည်, ဆန်ခါ, မော်တာ, အရာကျယ်ပြန့် applications များရှိပါတယ်,ဂျုံသန့်ရှင်းရေးစက်သည်ဂျုံကဲ့သို့သောအစေ့များနှင့်သင့်တော်သည်, ပြောင်းဖူး, ပဲမျိုးစုံ, မြေပဲနှင့်ဒါပေါ်မှာ, ကွဲပြားခြားနားသော grains.the ပဲပုပ်သန့်ရှင်းရေးစက်ကိုဖျက်သိမ်းရန်လွယ်ကူသည့်အခါဖြစ်စဉ်များကိုပြောင်းပေးလိမ့်မည်, နေရာလွတ်, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရိုးရှင်း, ကျောက်တုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ခြင်းစသောမြင့်မားသောထိရောက်မှုသည်ကျောက်စရစ်ခဲကိုခွဲထုတ်နိုင်သည်, အရွယ်အစားတူသော်လည်းအလေးချိန်ကွဲပြားသောပစ္စည်းမြေထုဆွဲအားနိယာမနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောအစေ့များသို့မဟုတ်အစေ့များ။ Sorghum သန့်စင်စက်ကိုကျောက်တုံးကဲ့သို့သောလေးလံသောအရောအနှောများကိုဖယ်ရှားရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်, သတ္တုအမှုန်, အခက်များ, အပိုင်းအစများအစေ့, သဲများနှင့်ဒါပေါ်ကုန်ကြမ်းကနေ. ကျောက်တုံးများကိုတိကျသောပိုက်လိုင်းဖြင့်အလိုအလျောက်ဖယ်ရှားနိုင်သည်.
1. စပါးသန့်ရှင်းစက်တွင်လေမှုတ်ဆေးလေတပ်ဆင်ထားသည်; ဒါကဆန်သန့်ရှင်းအောင်သေချာစေတယ်, လျော့နည်း bran နှင့်အတူ, အပူချိန်နိမ့်, အဖြူနှင့်အဖျင်းများကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြားနိုင်သည်.
2. ကောက်ပဲသီးနှံစိစစ်စက်သည်သုံးမျိုးနှင့်သုံးမျိုးသုံးနိုင်သည်, မျက်နှာပြင်နှုန်းရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 98%. ၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်, စပါးနှင့်ဆီအစေ့မှကျောက်စသည်တို့
3. ဒီအမှုန့်သန့်ရှင်းရေးစက် Hopper ပါဝင်သည်, ဝါသနာရှင်, ပန်ကာပိုက်, စနစ်နှင့်ဘောင်ကိုမောင်း. အလွယ်တကူရွေ့လျားနိုင်သည့် frame တစ်ခုလုံးပါဝင်သည်. မျက်နှာပြင်နှင့်ဘောင်စနစ်က separator ဖွဲ့စည်းပုံကိုချမှတ်, ဒါကြောင့်မတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.
မော်ဒယ် VTSC500 VTSC1000 VTSC2000
စွမ်းရည် (ကီလိုဂရမ် / နာရီ) 500 1000 2000
မျက်နှာပြင်ကွက် (မီလီမီတာ) စပါးအရသိရသည်
ပါဝါ (kw) 2.233
ယေဘုယျအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 65 120 180
ယေဘုယျ Dimension(မီလီမီတာ) 900*650*500 1100*650*600 1200*850*800